Vaovao - Global Market Stroller sy tsena stroller amin'ny taona 2020-Fiantraikan'ny COVID-19, fanadihadiana sy fanamby amin'ny fitomboana amin'ny ho avy
Ny "Fikarohana momba ny tsena avo lenta sy stroller an'ny tsena stroller 2020" dia manadihady ny satan'ny indostria sy ny fanantenan'ny faritra lehibe amin'ny antsipiriany miorina amin'ny mpilalao fototra, firenena, karazana vokatra ary indostria farany. Ity tatitra fikarohana ity dia manome famakafakana amin'ny ankapobeny ny fizarana amin'ny tsena, toy ny tsena amin'ny tsena, ny antsipirian'ny fanafarana sy ny fanondranana, ny firosoan'ny tsena, ny mpanamboatra lehibe, ny taham-pisondrotana ary ny faritra lehibe. Ny tatitra fikarohana momba ny tsena stroller sy stroller premium eran-tany dia misy fampahalalana omena araka ny mpanamboatra, ny faritra, ny karazany ary ny fampiharana.
Araka ny tatitra, ny tsenan'ny Premium Pram sy Baby Stroller dia hitombo amin'ny taha-pisondrotana isan-taona xx% mandritra ny vanim-potoana (2019-2027), ary hihoatra ny sandan'ny US $ XX amin'ny faran'ny 2027. Ny tsena dia manome ny mombamomba ireo mpilalao manan-danja lehibe, ao anatin'izany ny fironana amin'ny fandrosoana, ny antsipirian'ny tontolon'ny fifaninanana ary ny fivoaran'ny faritra isam-paritra
Ny areti-mandringana Covid-19 dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny ankamaroan'ny toekarena mandroso sy an-dalam-pandrosoana. Ny tatitra dia manarona ny famotopotorana ny fiantraikan'ny fidiram-bola, ny fanelingelenana amin'ny rojo mahazatra ary ny varavarana vao nosokafana, ny fizahana feno ny sehatry ny fandraharahana, ny fanaovana sarintany ny varavarana vao nosokafana, sns.
Global Premium Stroller sy Stroller Market Segmentation karazana: Stroller tokana, Stroller maromaro
Fampiharana fizarazarana stroller avo lenta sy mpandeha an-tsokosoko momba ny zaza: 9 volana latsaky ny 9 volana ka hatramin'ny 24 volana 24 volana